Dental Implants - คลินิกทันตกรรม
သွားနှုတ်သည့်အခါ တ်လိုက်သည့် သွားနေရာတွင် ပန်စိုက်ရန်လိုပါသည်။ သွားစိုက်ခြင်းမှာ သွားနှုတ်လိုက်သည့် လူနာများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ သွားပုံမှန် ပန်ဖြစ်စေမည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရရှည်တွင် ပျာ်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာစွာ နထိုင်နိုင်မည့် လှပပြီး စိတ်ချမ်းသာသောရလဒ်ကိုလည်း ပးစွမ်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သွားစိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာ လူတိုင်းသိသင့်သော အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။.
Fortunately, dental implant costs in Thailand are low compared to many western nations even though the procedure is performed by qualified and highly-trained dentists who utilize the most advanced techniques.
သွားစိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာ တိုက်တေနီယံ သို့မဟုတ် ကွဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဝက်အူ (screw) ကဲ့သို့သော သွားမြစ်တုကို မးရိုးထဲသို့ ထည့်စိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျိုးသွားသည့်သွား သို့မဟုတ် တ်လိုက်သည့်သွားနေရာတွင် အစားထိုးရန်အတွက် သွားအစွပ်များ၊ ဘးသွားသွယ်တန်းစိုက်ခြင်း (bridges) များ သို့မဟုတ် သွားတုများနေရာတွင် အစားထိုးပြီး dental implants ပုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကုထုံးအတွက် ကြာချိန်သည် မးရိုးအရည်အသွေး၊ သွားစိုက်ရန်လိုအပ်သည့် သွားအရေအတွက်ကဲ့သို့သော အရာများအပေါ် မူတည်သည်။
သွားစိုက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျိုးသွားသော သွားနေရာတွင် အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ မးရိုးနှင့် အခိုင်အခံ့တွယ်ဆက်ထားသော သွားအစွပ် သို့မဟုတ် bridges များနှင့် ချိတ်တွဲရန် Dental Implants ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖုတ်နိုင်၊ တပ်နိုင်သော သွားတုကို ချာ်ထွက်ခြင်း၊ နရာရွေ့ခြင်းများ မဖြစ်အောင် ချိတ်ဆက်ပေးရန် Dental Implants ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
လူနာက ပုံမှန်အတိုင်း စားသောက်နိုင်ခြင်း
မူလသဘာဝသွားများကဲ့သို့ လွယ်ကူစွာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု တိုးမြှင့်ပေးခြင်း
သင့်လျော်သော ဂရုစိုက်မှုပေးပါက ရရှည်တွင် သွားအစားထိုးနိုင်သည့် နည်းလမ်းရှိခြင်း
သွားစိုက်ခြင်း (Dental Implant) မပြုလုပ်မီ
သွားဆရာဝန်က dental implant လုပ်ရန် အကြံပြုလာပါက မပြုလုပ်မီတွင် အာက်ပါတို့ ပင်ဆင်ရန်လိုပါသည်။
သွားဆရာဝန်တစ်ဦးထံတွင် ပည့်စုံသော ခံတွင်းစစ်ဆေးခံရန်။
ကျန်းမာစွာ နထိုင်ရန်။ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိပါက ကုသမှုမခံယူမီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ကုသမှုမှာ သာမန်ထုံဆေးပေး၍ ခွဲစိတ်ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများမရှိပါက သွားစိုက်ခြင်းကို ပုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Dental Implant ပုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်s
သွားဆရာဝန်က ခံတွင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပင်ဆင်ခြင်းများ ပုလုပ်သည်။
အရိုးနှင့် ကိုယ်အင်္ဂါအခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရန် x-ray ရိုက်သည်။
ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ရန် လူနာ၏ ခံတွင်းပုံကို ယူသည်။
အချို့သော လူနာများအတွက် 3D CT Scan ဖတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျန်းမာစွာ နထိုင်ရန်။ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိပါက ကုသမှုမခံယူမီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ကုသမှုမှာ သာမန်ထုံဆေးပေး၍ ခွဲစိတ်ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများမရှိပါက သွားစိုက်ခြင်းကို ပုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Dental Implant ပုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်
သွားကို အဆင်ပြေသောနေရာတွင် စိုက်နိုင်ရေးအတွက် ခွဲစိတ်မှုကို ပုလုပ်ပါသည်။ အချို့သောလူနာများတွင် သွားမစိုက်မီ bone augmentation ခါ် သွားစိုက်ရန် မးရိုးတွင် အရိုး သို့မဟုတ် အရိုးနှင့်တူသော ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းခြင်း လုပ်ရပါသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် လူနာ၏အရိုး အရည်အသွေးနှင့် ပမာဏ စသည်ကိုလိုက်ပြီး အသစ်ထည့်သည့် အရိုးနှင့် ပါင်းစပ်သွားရန် စ်လ၊ သုံးလခန့် စာင့်ရပါသည်။
အသစ်ထည့်ထားသည့်အရာများ အရိုးနှင့် ခိုင်မြဲစွာ တွယ်ဆက်သွားပြီဆိုလျှင် သွားဆရာဝန်က စိုက်မည့်သွားတွင် ချိတ်မည့် သွားအစွပ်များ၊ သွားအထိန်းများ၊ သွားတုများ လုပ်ရန်အတွက် သွားနမူနာယူပါ။
ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် နာက်ထပ် ဆရာဝန်နှင့် ပခြင်းများ ရှိပါမည်။
Implant Surgery လုပ်ပြီးချိန်တွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ခြင်း
အရွတ်ကဲ့သို့သော မာသည့် အစားအသောက်များကို ရှာင်ပါ။
သွားကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် သုံးလတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ၊ ခာက်လတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ သွားဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။
န့ချင်းပြီး Implant လုပ်လို့ ရနိုင်သလား။
လူတော်တော်များများက န့ချင်းပြီး One Day Implant အကြောင်းကို ကြားဖူးကြသည်။ သိလိုကြသည်။ သွားစိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် သွားအစွပ်တပ်ခြင်းကို ချက်ချင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် လူနာ၏မေးရိုး အရည်အသွေးနှင့် ပမာဏကဲ့သို့သော သုံးသပ်စရာ ကိစ္စများစွာရှိပါသည်။
ထို့အပြင် အကယ်၍ implant placement နှင့် teeth fitting ကို န့ချင်းပြီး ဆာင်ရွက်သည်ဆိုလျှင် လူနာများအနေဖြင့် သွားကို အသုံးပြုရာတွင် သတိထား၍ အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ လအတန်ကြာသည်အထိ ပျာ့ပြောင်းသော အစားအစာများသာ စားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကုသမှုမခံယူမီတွင် ကျွမ်းကျင်သော သွားဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Dental Implant လုပ်ခြင်းသည် သဘာဝသွားနှင့် အနီးစပ်ဆုံးတူညီမှုရှိသည့် သွားစိုက်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူထားကြပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများသည်လည်း ယခင်ကနှင့် ယှဉ်လျှင် များစွာတိုးတက်လာပြီဖြစ်သည်။
ကုသသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကလည်း ယခင်ကလောက် မရှုပ်ထွေးတော့ဘဲ အချိန်ကုန်လည်း သက်သာသွားသည်။ အကယ်၍ dental implant လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်နေပါက မိမိအနီးအနားရှိ ကျွမ်းကျင်သော သွားဆရာဝန်နှင့် ပသတိုင်ပင်ပါ။